Ecommerce Website အတွက် ရှောင်ရှားရမည့်အမှားများ | Tree Myanmar
Ecommerce Website အတွက် ရှောင်ရှားရမည့်အမှားများ
Home / Website / Ecommerce Website အတွက် ရှောင်ရှားရမည့်အမှားများ
August 18th, 2021 06:55 am February 27, 2020
Jeff Bezos လို့ခေါ်တဲ့ သာမန်လူတစ်ဦးဟာ Amazon ဆိုတဲ့ E-commerce website ကြီးကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီးနောက် ကမ္ဘာပေါ်မှာ အချမ်းသာဆုံးဘီလျံနာ သူဌေးကြီးတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ အောင်မြင်တဲ့ E-commerce website ဆိုတာ ၀င်ငွေများစွာရရှိဖို့ အလားအလာရှိတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သုံးစွဲသူတွေအဆင်ပြေစေမယ့် website တစ်ခုက ကြီးမာကျယ်ပြန့်တဲ့ လက်လီအရောင်းဆိုင်တစ်ခုနဲ့ ညီမျှပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ E-commerce website ဖန်တီးရာမှာ ရှောင်ရှားသင့်တဲ့ အမှားတချို့ကို ပြောပြချင်ပါတယ်။
e-commerce website ပေါ်မှာ product တစ်ခုကို ပြသတဲ့အခါ အဓိကရည်ရွယ်ချက်က user တွေကို ၀ယ်ချင်လာအောင် ဆွဲဆောင်ဖို့ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒီလို၀ယ်ချင်လာအောင်လုပ်ဖို့က သင့်ရဲ့ပြိုင်ဖက်တွေဆီက ၀ယ်မယ့်အစား ဘာကြောင့်သင့်ဆီက ၀ယ်သင့်လဲဆိုတာ သူတို့သိဖို့လိုပါတယ်။ product ချင်းတူနေရင် သင့်ဆီက စျေးပိုသက်သာလို့လား? အခမဲ့ ပို့ပေးလား? website ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ပုံအတိုင်း အပြင်မှာ တကယ်တူရဲ့လား အစရှိသဖြင့်ပေါ့။ သင့်တန်ဖိုးကို သူတို့သိအောင် မဖော်ပြရင်တော့ သင့်ပြိုင်ဘက်ဆီကို သူတို့ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ သင့်ပြိုင်ဘက်တွေထက် ဘယ်အချက်တွေက သာတယ်ဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖော်ပြဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
သင့် website ရဲ့ home page မှာ product တွေကို categories တွေခွဲပြီး ပြသခြင်းက user တွေအတွက် ဘာတွေ၀ယ်လို့ရနိုင်မလဲဆိုတာ အတိုချုပ် အနေနဲ့ လျင်မြန်စွာသိရှိနိုင်ဖို့ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ product တစ်ခုချင်းစီအတွက် user သိဖို့လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်တွေ ထည့်သွင်းဖော်ပြြခင်းက သင့် product ရဲ့ အရည်အသွေးကို ယုံကြည်မှု ရရှိစေပါတယ်။ product တွေရဲ့ အချက်အလက်တွေမပါတာဟာ user အနေနဲ့ ၀ယ်ယူဖို့ တွန့်ဆုတ်နိုင်ပါတယ်။
user တွေက သင့် website က product တစ်ခုကို ကြိုက်လို့၀ယ်မယ်ဆိုပါစို့။ သူတို့အနေနဲ့ ဆက်သွယ်ရမယ့် သတင်းအချက်အလက်တွေရှာတွေ့ဖို့လည်းလိုပါတယ်။ e-commerce website ကို သုံးစွဲဖူးသူတွေအတွက်ကတော့ ပြသနာမရှိလှပေမယ့် fresh user တွေအတွက်တော့ လိုအပ်ပါတယ်။ contact information တွေကို website ရဲ့ header မှာဖြစ်ဖြစ် footer မှာဖြစ်ဖြစ် မဖြစ်မနေ ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးသင့်ပါတယ်။
သင့်product တွေကို ၀ယ်ဖူးတဲ့ user တွေဆီက reviews တွေကလည်း user အသစ်တွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် product တွေကို review ရေးဖို့ process ကိုလည်း ထည့်သွင်းသင့်ပါတယ်။
Website ပေါ်ကနေ product တွေကို checkout လုပ်မယ့် user တွေအတွက် checkout process ကို အရှည်ကြီး မဖော်ပြသင့်ပါဘူး။ အဆင့်အနည်းငယ်နဲ့ လုံလောက်ဖို့ပဲသင့်ပါတယ်။ payment နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်း user အများစု အဆင်ပြေစေနိုင်မယ့် အမျိုးအစားကိုသာ ရွေးချယ်ထည့်သွင်းသင့်ပါတယ်။
အပေါ်က အခြေခံအချက်လေးတွေ သိပြီးပြီဆိုတော့ မိမိ Website မှာ ဘာတွေလိုအပ်နေမလဲ ပြန်စစ်ဆေးကြည့်ပါဦးနော်
Read More: https://treemyanmar.com/blog/
သင့်လုပ်ငန်းအတွက် ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး လှပသေသပ်တဲ့ Graphic Design, Professional website တွေ လုပ်ဖို့ စိတ်၀င်စားရင်တော့ Tree Myanmar မှ အသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့် အကောင်းဆုံး ၀န်ဆောင်မှုပေး‌နေပါတယ်။
#TreeMyanmar #WebDesign #GraphicDesign
— at Yangon, Myanmar.
Website တစ်ခု Launch လုပ်ပြီးနောက် ပြုလုပ်သင့်သည့် အချက်များ
Tree Myanmar / November 30, 2019
Photoshop ကို Sketch နဲ့ ယှဥ်ကြည့်တဲ့အခါ
Website တစ်ခု Launch မလုပ်ခင် စစ်ဆေးသင့်သည့် အချက်များ
WordPress Website တစ်ခုအတွက် မရှိမဖြစ် Plugin (5) မျိုး
We have much planned for the future, working with great clients and continued website development
+959 798172207, +959 784611548
February 27, 2020 August 18th, 2021 06:55 am
November 30, 2019 August 18th, 2021 06:48 am
2021 @ Copyright. All Right Reserved by Tree Myanmar.